नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : "मदिरा र लागू औषधले मुलुक बर्बाद, भोज भतेरमा गयो भने ठूला नेताहरुको मुख त्यही रक्सीमा, अनि नयाँ पिढीले के गर्ने ? त्यही सिक्छन्" : चित्रबहादुर केसी
"मदिरा र लागू औषधले मुलुक बर्बाद, भोज भतेरमा गयो भने ठूला नेताहरुको मुख त्यही रक्सीमा, अनि नयाँ पिढीले के गर्ने ? त्यही सिक्छन्" : चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भोजभतेरमा गयो कि ठूला नेताहरुको मुख रक्सीमा पुग्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभासद केसीले मदिरा र लागू औषधले मुलुक बर्बाद बनाएको बताए । उनले भने-‘यसो भोज भतेरमा गयो भने ठूला नेताहरुको मुख त्यही रक्सीमा पुगेको हुन्छ । अनि नयाँ पिढीले के गर्ने ? त्यही सिक्छन् ।’ मापसे गर्‍यो भनेर सवारी चालकहरुलाई गाली गर्ने गरेको भन्दै उनले भने-‘मालिकले पनि खान्छन्, प्यासेन्जरले पनि खान्छन् । अनि उसले पनि किन नखाओस् ।’ केसीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाप्रति सरकार र सभासदहरु गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने-‘एउटै चिहान भएको छ ५१/५२ जना मान्छेको । तर, हामीलाई केही भए जस्तो लाग्दैन । मानौं केही भएको छैन । किनभने हाम्रो आफ्नो मर्नु परेको छैन ।’